Barclays oo xiraya xisaabaha xawaaladaha - BBC News Somali
Image caption Dahabshil ayaa ka mid ah xawaaladaha la doonayo in laga xiro xisaabta ay ku leeyihiin bangiga Barclays
Waxaa isa soo taraya culayska la saarayo bangiga Barclays oo sheegay in uu dhawaan xiri doono xisaabaha ay xawaaladaha ku leeyihiin bangigaasi.
Dad ka badan 100 ruux oo isugu jira aqoonyahanno iyo shaqaalaha hay'adaha gargaarka ayaa dalka Britain u gudbiyay warqad cabasho ah oo ay kaga hadlayaan dhibaatooyinka ka dhalan karo go'aanka xaawaaladaha loogu joojinayo inay adeegsadaan bangiyada Britain.
Soomaaliya ayaa la sheegay inay tahay meesha ugu baahida badan dhinaca Lacagta Xawaaladaha laisugu diro.
Dhibaatooyinkaas, waxaa sii xoogeeyey, sida wararka soo baxaya ay sheegayaan, bangiga weyn ee Barclays ee dalkan Britan laga leeyahay oo dhawaan soo saaray go'aan uu ku xiri doono, 240 xisaabood oo ay xawaaladaha lacagtu ku leeyihiin bangiga.
Maamulaha Xawaaladda Dahabshill Cbdirashid Ducaale, ayaa waxaa uu sheegay in go'aanka bangiga Barclays uu keeni karo in xawaaladaha ay ku shaqeeyaan si qarsoodi ah ama sharci darro ah.
Dahabshill ayaa ka mid ah xawaaladaha ay samayn doonto go'aankaasi u qaatay bangiga Barclays.
Boqolka aqoonyahan ee cabashada ka gudbiyay arrintan ayaa dalbanayo in muddo lix bilood ah dib loogu dhigo xiritaanka xisaabaha ay xawaaladaha ku leeyihiin bangiga, iyadoo intaas ka hor ay doonayaan in dowladda Britain ay xal u raadiso xawaaladaha Soomaaliyeed.